‘बादल’को विवेकमा बादल - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	‘बादल’को विवेकमा बादल
‘बादल’को विवेकमा बादल
by Tanahu Awaj 8th October 2020 8th October 2020
8th October 2020 8th October 2020 61 views
–२०७५ साउन १० मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर पालिका, उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो । देशको शान्ति सुरक्षको जिम्मा लिएका थिए, गृह मन्त्रीका रुपमा रामबहादुर थापा‘बादल’ले । बालात्कारी हत्याराको खोजी र उसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने विषयमा भएको प्रगति सोध्न संसदको समितिले उनलाई बोलायो । समितिका सदस्यहरुको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, यस्ता घटनाहरु हिजो पनि भएका थिए र भविष्यमा पनि भइरहन्छन् । उनको थप उत्तर थियो, पुँजीबादका कारण बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका हुन् ।
– केही समय अघि पश्चिम रुकुममा नवराज विक र उनका साथीहरुको सामूहिक हत्या गरियो । माथिल्लो जातकी प्रेमिकालाई विहे गरेर ल्याउन साथीहरुसंग गएका विकको हत्या पछि जातिय विभेदको कुरा
उठ्यो । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री बादलको उत्तर थियो अमेरिकामा पनि गोरा र कालाबीच विभेद छ ।
–बझाङको माष्टा गाउँ पालिका–२ खिकालाकी १२ वर्षिया बालिका सम्झना कामीको आसोज ७ मा बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा सोही गाउँको सिम मन्दिरमा शव भेटियो । यसअघि सप्तरीकी १७ वर्षिया बालिका संगिता मण्डलको सामूहिक बलात्कार पछि आत्महत्या गरिन् । यसका विषयमा र दैनिक ७ जनाका दरले बालात्कारका घटना हुन थालेकाले सो विषयमा सरकारको धारणा र शान्ति सुरक्षाको तयारीबारे बुझ्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको असोज १४ गते बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बादललाई बोलाइयो । समितिका सदस्यहरुको श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारका घटनाबारेको जिज्ञासामा बादलले भने, हामी धेरै चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छैन । हामी संसारका सवा दुइ सय देशमा हुने बलात्कारका घटनाको हिसाब गर्दा पछिल्लो १५ मा पर्छौं ।
–भदौ ८ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार ७ भदौमा अछामका बाढी पीडितलाई राहत बाँड्न भन्दै गृहमन्त्री बादल आफ्ना दलबल सहित त्यहाँ पुगे । बाढीले सामान्य क्षति गरेको धान खेतमा टेबल–कुर्सी राखेर धुमधामको कार्यक्रम गरे र बचेखुचेको धानको सर्वनाश गरेर फर्किए ।
यी केही प्रतिनिधी घटना हुन्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको वास्तविकता उदाङ्गो पार्ने । निर्मला पन्तको बालात्कारी हत्यारा २७ महिना बित्दासम्म कानुनको कठघरामा आउन सकेको छैन । घरमा उमेर पुगेकी छोरी भएका अभिभावक विहान सकुसल निस्केकी छोरी सांझ सोही अवस्थामा फर्कने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् । छोरीहरुको हत्या गर्भै देखि सुरु हुन्छ । त्यसबाट बचेर जन्म लिए र हुर्के भनेपनि यौन हिंसा, बालात्कारको शीकार हुनपर्ने डरले छोरीहरु निर्वाध सडकमा हिंड्न सक्ने अवस्था छैन । अनि देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको व्यक्ति भन्छ, बालात्कार तथा हत्याका घटना पहिला पनि भएका थिए र भविष्यमा पनि हुन्छन् । देशका बहुमत नागरिकले सत्तामा लगेर आफ्नो सुरक्षको जिम्मा लेला, भारोषा देला भनेर आशा राख्ने व्यक्तिबाट भविष्यमा पनि यस्ता घट्ना भइरहन्छन् भन्ने उत्तर आउँदा ति नागरिको भरोषा के होला ? कि नागरिकको सुरक्षाको दायित्व यो सरकारको होइन ? हरक्षण यौन हिँसाको, बालात्कारको र हत्याको भय बोकेर हाम्रा चेलीहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी निर्वाध काम गर्न सक्छन् ? ति छोरीका बाबु आमा, परिवारजन र साथीसंगी अनि आफन्तले कसरी ति चेलीलाई विद्यालय, विश्वविद्यालय वा कार्यक्षेत्रमा आश्वस्तता पूर्वक पठाउन सक्छन् ? कसको भरोषामा ति चेलीहरु विद्यालय, विश्वविद्यालय वा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने ? जसमाथी भरोषा ग¥यो उसैले आफ्नो संवेदनशीलतालाई मजाक बनाउँछ । एउटी चेलीको ज्यानै जाने कुरालाई हल्का लिन्छ । आम नेपाली नागरिकको भरोषा माथी यो भन्दा क्रुर मजाक अरु के हुनसक्छ ?
कथित तल्लो जात भएकै कारण रुकुम पश्चिमका नवराज विकले आफ्नी प्रेमिकालाई विवाह गर्ने उद्देश्यले लिन जाँदा ज्यान गुमाउनु प¥यो । संविधानले जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने भनेको छ । तर गृहमन्त्री बादल भन्छन्, जातका आधारमा विभेद अमेरिकामा पनि छ । के सत्तामा रहने, जिम्मेबार पदमा बस्ने अनि संविधानको परिपालना गराउँछु भनेर कुर्सीमा विराजमान हुनेहरुले यस्ता गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? विकसित भनिएका देशमा पनि जातको आधारमा विभेद हुने रहेछ, हामीले पनि गर्दा हुने रहेछ भनेर उक्साउने काम भयो कि भएन यो ? दलितहरु माथि कथित माथिल्लो जातका मानिसले गर्ने विभदका विरुद्ध लडन् भन्दै हजारौं दलित युवालाई शसस्त्र युद्धमा होम्ने, विभेद अन्त्यको सपना देखाउने बादल जब साँच्चै विभद हटाउने ठाउँमा पुग्दा भने त्यसलाई अत्यन्त हल्का लिन्छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?
दैनिक ७ जनाका दरले महिलाहरु यौन हिंसा, बालतकार र बलात्कार पछि हत्याको शीकार भएको तथ्याङ्क आफै सुनाउने गृहमन्त्री बादल भन्छन्, हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति होइन । के बादलकी छोरी यौन हिंसाको शीकार भएकी भए वा बालात्कृत भएकी भए उनी यसो भन्न सक्थे ? सरकारको सदस्यको रुपमा सबै नेपाली चेलीको ज्यान र आत्मसम्मान उनका लागि समान हुनुपर्ने होइन ? यौन हिंसामा परेकी वा बलात्कारको शिकार भएकी एउटी चेलीको जीवन, बाँचर पनि मरे सरह हुन्छ र देखियो यस्ता संवेदना हाम्रा गृहमन्त्रीमा छैन । यदि उनले आफुलाई बलात्कार र यौन हिंसाको शिकार भएकी चेलीको परिवारको सदस्य भएर सोचेको भए शायद यस्ता गैर जिम्मेबार जवाफ आउने थिएन ।
उनै गृहमन्त्री बादल अछाममा बाढी पीडितलाई राहत बाँड्न जाँदा कार्यक्रम गरेको स्थलको तस्वीर हर्ने हो भने कति संवेदनहिन छन् भन्ने प्रश्ट हुन्छ । बाढीले लतारेर खेलमा सुतेको धानमाथी टेबुल कुर्सी राखेर कार्यक्रम गरेका छन् । भदौको पहिलो साता बाढीले लडाएको धान उठ्न र फसल दिन सक्छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का समेत किन नगरेको ? यी घटना क्रमहरुलाई हेर्ने जो कोही पनि गृहमन्त्री बादलको विवेकमा बादल लागेको निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । उनको विवेकमा लागेका बादलले तीन करोड नेपालीको जीवनमा अन्धकार छाउने भएको छ । कि बादलले आफ्नो विवेकमा लागेका बादल हटाउनु प¥यो होइन भने बादललाई पदिय जिम्मबारीबाट हटाउन सबै नेपाली एकजुट हुन अब समय लगाउने छैनन् ।
मेरो हात कम चल्छ
घर बहाल दिंदा र लिंदा लाग्ने कानून
गणतन्त्र दिवसको शुभकामना-सम्पादकीय
मानुङ्कोटः उदाउँदो पर्यटकीय गन्तब्य
विचरा उपभोक्ता ः राज्य, व्यापारी दुवै लुट्छन्
सम्बन्ध विच्छेद, अंश हक र न्याय
बाल अधिकार दिवसको नाराले सार्थकता पाओस्-सम्पादकीय
अग्रजलाई सम्मान गरौं-सम्पादकीय
सिन्डिकेट र कार्टेलिङबमा कानून व्यवसाय ?
संसद विघटन विरूद्ध कानुन विद्